Asa mendrika, mampivoatra fiainana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Manome fiofanana ny mpiasa mba hahafahan’izy ireo mamaha olana ara-dalàna ny PMO, eo ambany fiahian’ny Fikambanan’i Jesoa. Anisan’ny mamaly ny adidy aman’andraikitry ny Fiangonana ho fampiroboroboana ny fahamendrehan’ny asa ny fisiany. Feno folo taona izy ary mbola vonona hanohy ny diany.
« Nisy kokoa ny fifanatonana eo amin’ny mpiasa sy ny mpampiasa », hoy Razaoarimanga Malala Violette, mpandrindra voalohany ny PMO ao amin’ny Ekar Fanahy masina Analamahitsy, raha naneho hevitra mikasika ny vokatra nentin’ny PMO. Feno folo taona ity fikambanana ity. Nahafantatra kokoa ny zony ilay mpiasa, afaka nitaky izany tany amin’ny orinasa niasany, ary indrindra rehefa misy olana ao dia mahay miresaka kokoa amin’ny mpampiasa azy toa izay hanao fitokonana. Nankalazaina ny 23 aogositra teo izany ho an’ity Ekar ity. « Nisy ny mora ary nisy ny sarotra », hoy hatrany izy. Nambarany fa “ny antom-pisian’ny PMO dia ny fisian’ny olana eny amin’ny sehatry ny orinasa. Ny fototry ny olana dia tsy voahaja araka ny tokony ho izy ny zon’ny mpiasa, ny karama tsy ara-dalàna ihany koa. Ny asa mafy kanefa ny karama kely”. Ny fahitana izany tsy rariny izany no nandrisika ny PMO hijoro mba hanampy ny mpiasa, mba hiala kokoa amin’ny fahasahiranana iainan’izy ireo. Nanamafy izany i mompera Ramahatradraibe Barnabe, pretra zezoita niasa teny Tanjombato, mpamorona ny PMO. Hoy izy nampahatsiahy ny tantara : “Fony aho curé tany Tanjombato, dia nahagaga ahy fa nandray mpiasa foana aho amin’ny 5 ora sasany ka hatramin’ny 8 ora sasany hariva. Mpiasan’ny orinasa afaka haba daholo ireo. Nieritreritra aho hoe misy fomba tokony hanovana ny pastoraly izany mba hitodika amin’ny mpiasa”. Ankoatra izany, hoy izy dia “Vehivavy ny mpiasan’ny zone franche. Anaty faritra iray misy 50 izy ireo hampanao batemy ny zanany, ny 12 tamin’ireo teraka tsy manam-bady. Dia hita fa nisy fiainana manahirana ka tapaka ny hevitro fa hanao ny pastoralin’ny mpiasa aho”. Nisy ekipa 15 nofanina nandritra ny telo volana tamin’izany fotoana izany. Nampivaingana ny hoe : “ny amin’ny orinasa sy ny amin’ny tokantrano no tena olana”. Nomena tombony ny resaka orinasa ka naharitra enim-bolana teo ny fikarohana ny zava-misy, narahim-pitadiavana vahaolana ho amin’izany. Koa dia nahitana soritra hoe: « tsy maintsy hofanina ry zareo”. Teraka teo ny ventin’asan’ny PMO : fanofanana sy fanabeazana mba hanarahana ny mpiasa. Vonona hanohy ny dia ny PMO, folo taona aty aoriana, na sarotra aza ny asa miandry azy ireo. Nisy fotoana dia narisarisa ihany ny fikambanana, toa ny tamin’ny taona 2009, izay nahavery asa ny Malagasy maro, noho ny kirizy. Mahatratra 23 ankehitriny ireo mpikambana mavitrika ao amin’ny Ekar Fanahy masina Analamahitsy.
Ny maha samy hafa ny PMO sy ny sendika
Ny tanjona dia iray ihany, samy mikatsaka ny zon’ny mpiasa, fa ny mahasamy hafa azy dia ny PMO miankina amin’ny Fiangonana. Izany hoe tsy sendika fa fikambanana. Vaomieran’asa eo anivon’ny Fiangonana ny PMO ary fikambanana mijoro ara-dalàna koa izy eo amin’ny sehatry ny fanjakana. Mamaly ilay nambaran’ny Papa Léon XIII, efa ho zato taona lasa, fa zo sy andraikitry ny Fiangonana ny mitady vahaolana mba hanalefahana farafaharatsiny ny ady tombontsoa izay ifanandrinan’ny mpampiasa sy ny mpiasa. Ary mba hitsinjovana ny hoavin’ny mpiasa iharan’ny tsy rariny miseho. Mitady vahaolana manakaiky kokoa ny an-drariny hahazoan’ny tsirairay ny anjara tandrify azy eo amin’ny tontolon’ny asa sy ny famokarana. Anisan’ny mpikambana iray ao amin’ny PMO Rajaonarivony Farasoa. Nahatsapa ny tenany fa nitondra soa ho azy ny fanofanana nomena. Hoy izy : “Tamin’ny taona 2008 aho no tao amin’ny PMO, fianarana momba ny zon’ny mpiasa no atao ao. Nahafantarako zavatra betsaka tokoa. Indrindra raha misy disadisa ny eo anivon’ny orinasa, dia fantatro izay tokony hataoko.”
“Ny vina dia mba hisandrahaka kokoa ny PMO, fa amin’izao dia paroasy telo ihany no misy anay : Tanjombato sy Anosibe ary Analamahitsy”, hoy Malala. Rariana mba hisokatra kokoa ny PMO na ny eto Antananarivo na ny eny amin’ny faritra hafa. Satria misy vokany tsara foana ny fiofanana, izay iarahana amin’ny inspecteur de travail. Nanipika ny mpamorona ny PMO, mompera Barnabe fa efa mandray andraikitra ireo lahika ho an’ny PMO, ho ampiroboroboina izany ary ezahina hisy ny ivontoerana iray ao Faravohitra, izay azon’ny olona atonina. Satria ny fotoana fiofanana ihany no ifampitaomana hatrizay. Voasoratra ao amin’ny Baiboly, mitory hafatra ho an’ny mpampiasa izao manaraka izao: “Aoka mba tsy hanararaotra, hamitaka, hangalatra” (Jakoba 5, 1-6).